दमकमा शंकाश्पद भेटिएको भनिएको प्लाष्टिकको चामल हो त ? यस्तो आयो ल्याव परिक्षण रिर्पोट – Sawal Nepal ||The Power of Information
दमक । झापाको दमकमा उपभोक्ताहरुले प्रयोग गरिरहेको चामल र पसलबाट नुमना लिईएको चामल परिक्षण गर्दा उपभोक्ताले भने अनुसार यसमा प्लाष्टिक नमिसिएको बताईएको छ । शनिवार बेलुका खाद्य प्रविधि तथा गुण नियण्त्रण डिभिजन कार्यालय झापाका प्रमुख भरतबहादुर पुरीले नमुना परिक्षणका लिएर जानु भएको थियो ।
आइतवार यसको रिर्पोट आउने बताइएपनि सोमबार ४ बजेसम्म पनि यस बिषयमा रिर्पोट नआएपछि शंका गरिन थालेको थियो । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियण्त्रण कार्यालय बिराटनगरका प्रमुख प्रमोद कोइरालाले आफुहरुले प्लाष्टिकको चामल भए नभएको भनेर परिक्षण गर्दा दाबी गरिएजस्तो प्लाष्टिक नभएको पाईएको बताउनु भयो । प्लाष्टिकको वा प्लाष्टिक मिसाईएको पाइएन, उहाँले भन्नुभयो ।
केहि समयदेखि पुर्वमा यस बिषयमा धेरै गुनासोहरु सुनिएको र सामाजिक सञ्जालहरुमा समेत यो बिषय आएकाले आफुहरुले सघन रुपमा यसको परिक्षण गरेको पनि उहाँले दाबी गर्नु भएको छ । हामीले लिईएको नमुनाको सघन रुपमा परिक्षण गरेका छौ र यसमा बाहिर हल्ला आएजस्तो अवस्था छैन, उहाँले भन्नुभयो । यसका सम्पूर्ण नतिजा डिभिजन कार्यालयमा पठाईएको पनि उहाँको भनाइ छ ।
खाद्य प्रविधि तथा गुण नियण्त्रण डिभिजन कार्यालय झापाका प्रमुख भरतबहादुर पुरीका अनुसार दमक नगरपालिकाका नगर प्रमुख रोमनाथ ओली, दमक बजार अनुगमन समितिका संयोजक एवं वडाध्यक्ष भीम पौड्याल सहितको टोलीले बिभिन्न ४ ठाँउको नमुना संकलन गरेको र त्यो परिक्षणका लागि आफुले ल्यावमा लगेको जनाउनु भयो । उपभोक्ताको गुनासो र आशंका लागेकाले हामीले परिक्षणका लगेका थियौ तर त्यस्तो केहि पनि पाइएन, उहाँले भन्नुभयो ।
वडा नं. ७ का वडाध्यक्ष समेत रहनु भएका दमक बजार अनुगमन समितिका संयोजक पौड्यालले केहि समयमा नै आउछ भनेको रिर्पोट ढिला गरी आँउदा आशंका बढेको बताउनु भयो । मिसावट तथा प्लाष्टिकको चामल नभएको रिर्पोट आएको सुनेको र केहि न केहि होला भन्ने लागेको थियो, पौड्यालले भन्नुभयो । उपभोक्ताहरुले चामल पकाएर डल्ला बनाएर भुइमा बजार्दा प्लाष्टिकजस्तो आवाज आएको र डल्ला समेत नफुटेको भन्दै जाँचको माग गरेका थिए । डढाउदा पनि अर्को चामल भन्दा फरक देखिएको भन्दै उनिहरुले नगरपालिकाको ध्यानकर्षण पनि गराएका थिए ।
भारतबाट आउने दुवार ब्राण्डको चामलमा मिसावटको आशंका गरिएको थियो । दमकका उपभोक्ता डार्विन संग्रौलाका अनुसार आफुहरुले उक्त चामल नै उपभोग गर्न छाडेको बताउनु भयो । अन्य चामलहरु पनि हामीले डल्ला बनाएर हेरेका छौ तर यो फरक छ, उहाँले भन्नुभयो । सार्वजनिक ठाँउमा नै नक्कली चामल पत्ता लगाउने विधिहरु गरेरमात्र हामीले सम्बन्धित निकायलाइ खबर गरेका थियौ तर अहिले केहि छैन भनेर रिर्पोट आएको सुन्दा अचम्म लागेको छ, उहाँको भनाइ छ ।